हराएको विमान मसिनेलेकमा दुर्घटनाग्रस्त, १८ जनाकै शव भेटियो – Newsagro
हराएको विमान मसिनेलेकमा दुर्घटनाग्रस्त, १८ जनाकै शव भेटियो
February 17, 2014 February 17, 2014 NewsAgro0Comments
काठमाडौं, ६ फागुन । आइतबार दिउँसोबाट हराएको नेपाल वायु सेवा निगमको ट्वीनअटर विमान अर्घाखाँचीको ढिकुरा गाविसको ८ मसिनेलेकमा दुर्घटना भएको पुष्टि छ । घटनास्थल पुगेका प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पन्थीले विमान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको अनलाइखबरलाई बताएका छन् ।
सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीको उद्दार सुरु गरेको छ । घटनास्थलमा रहेका सशस्त्रका प्रहरी निरीक्षक किरण खत्रीले पश्चिम क्षेत्र शसस्त्र प्रहरी बल मुक्तिनाथ बाहिनीका बाहिनीपति डीआईजी नारायणबाबु थापालाई दिएको जानकारी अनुसार १८ जनाको शव भेटिएको छ । केहीको शव भने पहिचान हुन सक्ने अवस्थामा रहेको थापाले बताए ।
दुर्घटनास्थल करिब सात हजार फिट उचाईमा रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । डाँडामा ठोकिएर दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको विमानका टुक्रा र मृतकको शवका टुक्रा २/३ सय मिटर वरपर भेटिएका छन् ।स्थानीयबासीले सोमबार विहान मसिनेलेकमा विमान दुर्घटना भएको खबर गरेपछि प्रहरी टोली गएको थियो । यसअघि खिदिममा दुर्घटना भएको भनिएको थियो ।
काठमाडौंबाट पोखरा हुँदै जुम्लाका लागि उडेको विमानमा विमानमा चालक दलका सदस्य र एक बालकसहित १८ जना छन् । अन्तिम पटक १:१३ मा भैरहवा विमानस्थलसँग सम्पर्क हुँदा क्याप्टेनले मौसम खराव रहेको सूचना दिएका थिए । अपराह्नतिर त्रिभुवन विमानस्थल टावरका अधिकारीहरुले विमान अर्घाखाँचीको खिदिम जंगलमा दुर्घटना आशंका गरेका थिए ।
काठमाडौंबाट पोखरा हुँदै जुम्ला उडेको नेपाल वायुसेवा निगमको ट्वीनअटर जहाज आइतबार दिउँसो सवा एक बजेदेखि सम्पर्कविहीन छ। अर्घाखाँची र पाल्पाको सिमानाका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीयले दिएको जानकारी अनुसार खोजी कार्य गरिए पनि दुर्घटनास्थल अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन।
पाल्पाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरञ्जन ज्ञवालीका अनुसार दिनभर परेको असिनापानीका कारण उद्धार कार्य प्रभावित भएको छ। अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकका अनुसार मौसमका कारण जहाज यहीँ खसेको हो भन्न सकिने अवस्था छैन।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाको उद्धार टोली संभावित भनिएको दुर्घटनास्थल पुगे पनि कुनै जानकारी पाउन सकेको छैन। नेपाली सेनाका अनुसार अर्घाखाँची र पाल्पाबाट ७५ जनाको टोली उद्धारमा खटिए पनि दुर्घटनाग्रस्त विमान पत्ता लागेको छैन।
उद्धारका लागि पठाइएको हेलिकप्टर खराब मौसमका कारण घटनास्थल जान सकेको छैन। अँध्यारो भइसकेकोले उद्धार कार्य अझै प्रभावित हुने निश्चित छ। ‘रात परिसकेको छ, तैपनि हामी अझै दुर्घटनास्थल पत्ता लगाउन अघि बढिरहेका छौँ,’ ज्ञवालीले भने, ‘गाडी जाने ठाउँसम्म गाडीमा जान्छौँ, त्यसपछि पैदलै भए पनि खोजी कार्य जारी राख्छौँ। मौसमका कारण हेलिकप्टर आउन सक्ने स्थिति छैन।’
‘मिडियामा दुर्घटनास्थल बारे समाचार आए पनि कसैले दुर्घटना भएको यहीँ हो भनी देखेका छैनन्। सबैले आवाजकै भरमा लखकाटेका हुन्, उनले भने, ‘आवाजको पनि विश्वास नहुने भयो। किनभने चट्याङ परिरहेको छ।’ १९ सिटको जहाजमा चालक दलका तीन सदस्यसहित सहित १५ यात्रु सवार थिए। १५ मध्ये एक जना डेनमार्कका र एक नाबालक थिए।
१८ जनासहित आइतबार ११ बजेर ५५ मिनेटमा काठमाडौंबाट उडेको ‘नाइन एन – एबीबी’ कलसाइन भएको जहाज पोखरामा इन्धन भरेपछि १२ बजेर ४३ मिनेटमा जुम्लाका लागि उडेको थियो। पोखराबाट जुम्ला जाँदै गर्दा जहाज सम्पर्कविहीन भएको थियो। क्याप्टेन शंकर श्रेष्ठले उडाएको जहाजमा कोपाइलट रवीन्द्र वञ्जारा र एयर होस्टेस मुना महर्जन थिए।
काठमाडौं-पोखरा- जुम्ला- नेपालगञ्जका लागि उडेको विमान काठमाडौं तथा पोखराका दुबै टावरसँग सम्पर्कविहीन भएपछि खोजी तथा उद्धार सुरु गरिएको थियो। पोखरा विमानस्थल प्रमुख प्रतापबाबु तिवारीले बताए, ‘जुम्लाको मौसम राम्रो भएर पठाएका थियौँ’, तिवारीले भने, ‘तर मौसम खराब भएपछि जहाज सम्पर्कमा आएन।’
तिवारीका अनुसार जहाज उडेको केही समयमै पाइलट र जुम्ला टावरसँग सम्पर्क भएको थियो। जुम्लामा मौसममा खरावी आएपछि जुम्लामा जहाज अवतरण गर्न नसकिने जानकारी पाइलटलाई दिइएको थियो। त्यसपछि पाइलट शंकर श्रेष्ठले सुर्खेत विमानस्थलमा सम्पर्क गरेका थिए । पोखरा विमानस्थल टावरसँग भने १ बजेर १३ मिनेटमा रुकुमको खारामाथि जहाज उडिरहेको अन्तिम सम्पर्क भएको थियो।
यसैबीच भैरहवा टावरले पनि १ बजेर ८ मिनेटमा पाइलटले जहाजलाई फर्काउन कोशिस गरेको कुराकानी रेकर्ड गरिएको जानकारी नेपाल वायु सेवा निगमले दिएको छ।
७ उमा तामाङ
८ डा. विकल्प पोखरेल
९ डिपी उपाध्याय
१० राजेन्द्रप्रसाद देवकोटा
११ दीपक श्रेष्ठ
१२ डि शाही
१३ आर चौलागाईं
१४ एम म्याथिसेन (डेनमार्क) तथा
१५ नाम नखुलेका नाबालक
४३ वर्ष पुरानो ‘ऐतिहासिक’ विमान
नेपाल वायुसेवा निगमले यो जहाज क्यानाडेली कम्पनीले २०२८ साल असार ३ गते काठमाडौँ पुर्‍याइदिएको थियो।
दुई वर्षपछि अर्थात् २०३० साल जेठ २८ गते विराटनगरबाट काठमाडौँ उड्ने क्रममा कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले यही विमान अपहरण गरी भारतको फारबिसगञ्जमा पुर्‍याइ ३० लाख भारु लुटेका थिए।
यही विमान यसअघि आइतबारकै दिन जुम्लामै दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। २०४९ साल असार २१ गते आइतबार भएको त्यो दुर्घटनामा त्यसमा सवार तीन जनालाई केही भएको थिएन। जुम्लाबाट टेक अफ गर्ने क्रममा रनवेमा चिप्लिएर जहाज बारमा ठोक्किएको थियो। मर्मतपछि जहाजको सेवा सुचारु गरिएको थियो।
निगमसँग दुई वटा ट्विनअटर जहाज रहेकोमा अब एउटा मात्र बाँकी छ।
युरोपेली युनियनले नेपाली विमानको उड्डयन सुरक्षा कमजोर रहेको भन्दै आफ्नो संगठनका सदस्य राष्ट्रमा उडान प्रतिबन्ध लगाउनुको साथै आफ्ना नागरिकलाई नेपाली विमानमा नचढ्न सचेत गराएको थियो। प्रतिबन्ध हटाउन नेपालले प्रयास गरिरहेकै बेला यो दुर्घटना भएको छ।
← भोटेचौरको चिया बगान पर्यटक आकर्षणको केन्द्र
पकेट क्षेत्रमै मासिँदै सुन्तला →
यो समाचार 7053 पटक पढिएकोबुटवल । रूपन्देही मत्स्य ह्याचरीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । माछाको पकेट जिल्ला रूपन्देहीमा माछाका भुरा उत्पादनमा
यो समाचार 6904 पटक पढिएकोरासायनिक मल अनियमितता प्रकरण काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद
यो समाचार 7461 पटक पढिएकोWhy Farmers Cry ? – Suman Pant – Ram Bahadur Gautam has invested $1.4 million(14 crore
यो समाचार 7918 पटक पढिएकोकाठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि किसानले खेतबारी जोत्न प्रयोग गर्ने ट्रयाक्टरमा भ्याट छुटको सुविधा हटाएपछि